ဘဏ်ချေးငွေဆပ်ရန် ကျန်နေသည့် ရခိုင်မှတောင်သူများကို ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဟုဆို - Yangon Media Group
စစ်တွေ၊ သြဂုတ် ၁၁ – ဘဏ် ချေးငွေများကို အချိန်မီမဆပ်နိုင် သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တောင်သူ များအား ဥပဒေအရ အရေးယူသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေမြို့ရှိမြန်မာ့ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ သိရ သည်။
မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှ မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရန် ယခင်နှစ်များ က ထုတ်ချေးထားသော ဘဏ်ချေး ငွေများကို ပြန်မဆပ်သည့်တောင် သူများအနေဖြင့် အချိန်မီပြန်ဆပ် ကြရန် စစ်တွေရှိ မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မန်နေဂျာ ဦးအေး သိန်းက ပြောကြားသည်။
”ချေးငွေရာသီကုန်ဆုံးသွား ရင်တော့ သူတို့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ချုပ် ထားတဲ့ စာချုပ်မှာပါတဲ့ စည်းကမ်း ချက်များအတိုင်း ဥပဒေလမ်းကြောင်း အရပေါ့နော်။ မြို့နယ်မှာ ချေးငွေ အကြံပေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ ကို အဲဒီအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတော့ အ ဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီ ဆောင် ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်”ဟု ဦးအေးသိန်းက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂ဝ၁၂ ခု နှစ်မှ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အထိ ဘဏ် ချေးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ငါးထောင် ကျော်အား လယ်သမားများက ပြန် မဆပ်ဘဲရှိနေသေးကြောင်း မြန် မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ သိ ရသည်။
”စပါးအထွက်နှုန်းကလည်း မကောင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း တက်တော့ ကျွန်တော်တို့မှာ စား ဝတ်နေရေးတွေ အခက်အခဲဖြစ် နေရလို့ ပြန်မဆပ်နိုင်သေးတာပါ။ အဆင်ပြေရင်တော့ ပြန်ဆပ်သွား မှာပါ”ဟု မင်းပြားမြို့နယ်မှ ဘဏ် ချေးငွေ ပြန်မဆပ်နိုင်သေးသည့် တောင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တောင်သူ ဦးရေ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော် အား မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရန် ယခုနှစ်တွင် ဘဏ်ချေးငွေ ကျပ်ဘီလီယံ ၉ဝ ကျော်ကို မေလမှစတင်ထုတ်ချေး ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဒေသန္တရစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ မော်လမြိုင်၌ကျင်းပ
အခြေခံပညာ နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲမေးခွန်းနှင့် အဖြေလွှာများ မပေါက်ကြားစေရန် တာဝန်ရှိသူများကို အဆ?
တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို ပြုံယမ်း အိုလံပစ်ဟု ဝေဖန်ခြင်းအပေါ်
ဘရာဇီး သမ္မတဟောင်း လူလာအား သမ္မတအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မပြုဟူ၍ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံရုံးအ??
ဆောက်သမ်တန် တိုက်စစ်မှူး ချာလီအော်စတင် သုံးပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရ
အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်နိုင်ရေးကို နောက်ဆုံးအနေဖြင့် နေ့ချင်းပြီး လု?